‘उहाँ’जस्ता पात्रबाट देश चल्दैन :: मोहन चापागाईं (राजनीतिक विश्लेषक) « Nepal24Hours.com – 'Integration Through Media'
‘उहाँ’जस्ता पात्रबाट देश चल्दैन :: मोहन चापागाईं (राजनीतिक विश्लेषक)
२१ जेष्ठ २०७२, बिहीबार ०१:१३ मा प्रकाशित
० सुशील कोइरालासँग तपाईंको कुनै बेला गज्जबको दोस्ती थियो, सुशीलजी यत्तिको नालायक व्यक्ति ठहरिनुहोला भन्ने तपाईंलाई पहिले आभास थियो ?
– सुशील कोइरालासँग दोस्तीको सवाल त आयो, तर मैले माक्र्सिज्मविरुद्ध उभिनको निम्ति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको सहकार्यलाई आधार बनाएको थिएँ । तर, उहाँहरू सत्ताका लागि बीपीकै सिद्धन्तसमेत छोडेर लागिपर्नुभयो । यो मैले पटक–पटक दोहो-याउँदै आएको छु, र सत्य पनि यही नै हो । यसै दौरानमा सुशील कोइरालासँग पनि केही उठबस् या हिँडडुल गरेकै हुँ । यहाँसम्म कि गएको चुनावसम्म पनि उहाँ आफैँले टेलिफोन गरेर ‘नरहरिको चुनाव हेरिदिनुप-यो’ भन्नुभएकै हो । जवाफमा मैले ‘म कम्युनिस्टसँग मिल्न सक्दिनँ, त्यो आइडियोलोजी ठीक नलागेर छोडेर आएको व्यक्ति हुँ, तपाईंहरूलाई त्यस्तो बाध्यता छ होला, मलाई त छैन’ भनिदिएँ । मेरो जवाफ सुनेपछि उहाँले ‘पछि कुरा गरौँला’ भनेर फोन राख्नुभयो, त्यसयता हामीबीच कुनै सम्पर्क छैन । जहाँसम्म उहाँको क्षमताको कुरा हो, पहिलेको र अहिलेको जीवनशैलीमा व्यापक फरकपन आएको देख्छु ।
० खास के फरक देख्नुभयो ?
– उहाँको डिसिजन गर्ने क्षमता नै देखिएन ।
० पहिलेचाहिँ डिसिजन गर्ने क्षमता थियो र ?
– कोठाभित्र बसेर भए पनि एउटा समूहको निर्माण गरी पार्टीलाई संस्थागत गर्ने गफ उहाँ लडाउनुहुन्थ्यो । अहिले हेर्दा पार्टीलाई संस्थागत तुल्याउने त होइन कसरी हुन्छ आफ्नो सत्ता बचाउने धुनमा उहाँ तल्लीन देखिनुहुन्छ ।
० यिनी पदलोलुप होइनन्, त्यागी र इमानदार हुन् भनी चलेको हल्लाचाहिँ गलतै देखियो त ?
– त्यो त सोझै गलत देखियो नि । यहीँनेर यो पनि भनिहालौँ कि नब्बे सालको भुइँचालोमा जुद्धशमशेर प्रधानमन्त्री थिए, अहिले भुइँचालो जाँदा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छन् । सभ्यताको रेसियो हेर्दा त्यतिबेलाको तुलनामा अहिले कता हो कता माथि हुनुपर्ने, तर उसबेला भूकम्प जाँदा जुद्धशमशेरले राष्ट्रको नाममा जारी गरेको सन्देशजत्तिको स्तरीय र प्रभावशाली अहिलेका सुशील कोइरालाले सन्देश जारी गर्न सकेनन् । जनतालाई के राहत दिन खोजेको, विशेष योजना के छ, केही स्पष्ट छैन । उहाँ त केवल पदका लागि मात्र प्रधानमन्त्री बनेर बालुवाटारमा टाँसिन चाहेजस्तो अनुभूति भइरहेछ ।
० त्यसो भए सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुअघि जे हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री बनेपछि उहाँ ‘एक्सपोज’ हुनुभयो भन्न मिल्छ ?
– प्रधानमन्त्री बन्नुअघिको उहाँको कार्यशैलीसँग म भलिभाँती परिचित छु, तर प्रधानमन्त्री भएपछि मैले उहाँसँग भेटघाट गरेको छैन र भेट्ने चाहना राखेको पनि छैन । बीपीले त उहाँलाई एन्टिकम्युनिस्टको रूपमा विकसित गर्नुभएकोले त्यही खालको हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले त सुशील कोइराला थामथुमे व्यक्तित्व बनेर देखिनुभएको छ । त्यो खालको जीवनशैली, राजनीतिक क्यारेक्टर या पहिलेको व्यक्तित्व म देखिरहेको छैन उहाँमा ।
० सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीमा मात्रै असफल हुनुभएको हो कि पार्टी–सभापतिका रूपमा पनि, के देख्नुहुन्छ तपाईं ?
– हरपक्षबाट असफल देखिनुहुँदै छ उहाँ । म पार्टीलाई एक इन्स्टिच्युटको रूपमा विकास गरेर लैजान्छु भन्नुहुन्थ्यो, तर अहिलेसम्म पनि कमिटीहरू नै अधुरा छन्, केन्द्रीय कमिटी नै पूरा भएको मैले सुन्न पाएको छैन । यस्तोमा उहाँलाई कसरी सबल र सक्षम सभापति भन्ने ?! नेपालको परिवेशमा मेरो अवधारणा के हो भने जो पार्टी चलाउँछ, जो सरकार चलाउँछ, त्यो व्यक्ति एकप्रकारले डिक्टेटर भएर चलाउने हिम्मतिलो हुनुपर्छ, लैफुङे ताल देखाउने होइन । उहाँको त कुनै नीति पनि भएजस्तो लाग्दैन र कार्यशैली पनि ठीक रहेको देखिएन ।
० यस्तो परिवेशमा काङ्ग्रेसको कमाण्ड समयोचित तवरले सम्हाल्न सक्ने कुनै सम्भावित नेता तपाईंको नजरमा छन् कि छैनन् ?
– काङ्ग्रेसको इतिहास र त्यसको सङ्घर्षको स्वरूपले मात्र अहिलेको परिवेशमा पनि यो जसोतसो चलेको हो । व्यक्ति या व्यक्तित्वको हिसाबले त त्यस्तो आशा गर्न सकिने नेता मेरो नजरमा त अहिलेसम्म कोही परेको छैन ।
० त्यसो भए के काङ्ग्रेस अब यत्तिकै सकिन्छ त ?
– इतिहास छ, तर विकल्प छैन । काङ्ग्रेस यस्तो अभिशापमा परेको छ यतिबेला । विकल्प हुनुप-यो । छिमेकी राष्ट्र भारतको एउटा उदाहरण हेरौँ, हिन्दी र हिन्दुस्तान भन्ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को अहिले एकल बहुमतको सरकार बन्यो । कुनै बेला एक सिट ल्याउन पनि हम्मे–हम्मे पर्ने भाजपा अहिले यस्तो बलिष्ट रूपमा देखाप-यो । अपोजिसनसमेत छैन भनेजस्तो अवस्था त्यहाँ छ । यहाँ काङ्ग्रेस समाप्तै भएको त होइन, यसको इतिहास त मासिएको थिएन नि । तर, लिडरसिप या नेतृत्वको कमजोरीले गर्दा बेहाल छ । यस्तै हालत प्रतिपक्षको पनि छ । माक्र्स–लेनिनको नाममा अपोजिसन छ, तर आफू विदेश जानुपर्दा या विदेशी आफ्नो कार्यालयमा आउँदा माक्र्स–माओका तस्बिर निकाल्दै हामी कम्युनिस्ट होइनौँ भन्नुपर्ने दयनीय अवस्था तिनको छ । यसैगरी अन्तिम राजाको पनि कुनै नीति–रणनीति म देखिरहेको छैन । यस्तोमा काङ्ग्रेस मात्रै होइन सबैको हालत नाजुक देखिन्छ ।
० यसको मतलब नेपालको राजनीतिको बाटो एकदम धुमिल र अन्योलग्रस्त छ भन्नुपर्ने भयो, हो ?
– एकदम अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको छ नेपालको राजनीति । हाम्रो आफ्नो राजनीति नै छैन भन्दा हुन्छ । विदेशीले खै के–कसरी चलाइदिएका छन्, तिनैका जुठोपुरो खाएर हामी बसेका छौँ । यस्तो नाजुक अवस्था हो यो ।
० यस्तो हालतमा नेपाल धेरै समय बाँच्न सक्ला त ?
– प्रकृतिले त आक्रमण गरिसकेकै छ । नागरिक डराएर बिदेसिँदै छन् । मिल्छ भने जम्मै बिदेसिन बेर छैन भनेजस्तो अवस्था देखिएको छ । सरकारको कुनै आसलाग्दो पोलिसी नै नभएकाले युवाशक्ति बिदेसिन बाध्य छ । छिटफुट देशमा अड्किएकाहरू पनि निराशामा बाँच्न विवश छन् । राज्यको सिस्टम र स्वरूप पनि केही नबुझिने प्रकारको बन्दै छ । सङ्घीय राज्य र सरकारको कुरा जोडतोडले चलाइएको छ । फेडरिज्मको कुरा गर्दा मेरो बुझाइमा अमेरिकाको सङ्घीयता सबभन्दा सफल हो । त्यहाँको इतिहास पढ्दा तेह्रवटा स्टेटले फिलाडेल्फिया सम्मेलन गरी हस्ताक्षर गरेर सङ्घ लागू गर्दा पनि त्यहाँ विद्रोह भयो, सिभिल वार भयो । अनि त्यहाँ जर्ज वासिङ्टन डिक्टेटर बनेर देखापरे । पछि लिङ्कनले पनि दास प्रथा हटाएर परिस्थिति शान्त तुल्याउनुप-यो । अब यहाँको त के कुरा गर्ने र ! लौ, राजतन्त्र हट्यो रे, त्यसपछिको राजनीतिक विकास के त खै ?
० यो मुलुक राम्रोसँग अघि बढ्न के हुनुपर्ला त, कुनै सुझाव छ तपाईंसँग ?
– सबैभन्दा पहिलो कुरा त जनताले मुलुकको परिस्थितिको राम्रो बोध गर्नुप-यो । आफ्नो कर्तव्य बोध गर्नुप-यो । लिडरसिपको विकास जनताबाटै हुने हो । ०३९ सालतिरको एउटा उदाहरण लिऊँ । बाबुराम भट्टराई, जो अहिले ठूलै नेतामा दरिनुभएको छ, उहाँ एउटा सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो इन्डियामा, त्यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा भट्टराईजीको पनि सहभागिता थियो भने म प्रथम वक्ताकै रूपमा थिएँ– माक्र्सवाद होइन नेपालवाद हुनुपर्छ भनेर मैले त्यतिबेलै घोषणा गरिदिएको थिएँ । भट्टराईजीले माक्र्सवादको मच्ची–मच्चीकन वकालत गर्नुभयो । यहाँ मैले अहिले किन उहाँको नाम लिएँ भने, माक्र्सवाद भनेर मच्चिए पनि उहाँको कार्यशैली अलिक फरक रह्यो, कमसेकम काठमाडौंको बाटो विस्तार गर्ने निर्णय त लिनुभयो उहाँले । यहाँ सिद्धान्त फलाकेर मात्र त केही हुनेवाला छैन । ठोस डिसिजन लिएर काम गर्ने–गराउने स्तरका नेतै छैनन् । काम गर्ने पात्र देखिँदैदेखिँदैन । यो विडम्बनाको विषय हो । सुशील कोइरालाजस्ता पात्रको स्थानमा अर्को ल्याउनुपर्ने चर्चा चलेको छ । म पनि उहाँजस्ता पात्रबाट काम चल्दैचल्दैन, छोडेर भागे हुन्छ भन्छु । तर, उहाँपछि को त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । बदलामा कसलाई ल्याएर के होला र ? भन्ने खालको निराशा कायम छ यहाँ ।
० किन, केपी ओलीले काम गर्न सक्नुहुन्न र ?
– काम गर्न नसक्ने या सक्दिनँ भन्ने त को पो छ र यहाँ, जसले पनि चलाइरहेकै छन् नि चलाउन त । तर, जुद्धशमशेरले जति काम देखाउन सक्ने पनि यहाँ कोही छैनन् । एउटा भुइँचालो जाँदा उचित तवरले परिचालन गर्न पनि नसक्ने सरकार छ । सरकार छैन भन्न पनि नमिल्ने, काम देखायो भन्न पनि नसकिने अवस्था छ नि अहिले त । हुन त केपीजी पनि बेलाबेलामा ठोस पारा देखाउन खोज्नुहुन्छ, ‘म बाँचेसम्म नेपाल टुक्रिन दिन्नँ’ भन्ने प्रतिबद्धता उहाँ जनाउनुहुन्छ । तर, त्यसमा अडान लिएर काम देखाउन उहाँले सक्नुहोला कि नहोला, प्रश्न कायमै छ । किनकि, एमाओवादीको कुरामा बहकिन्न भन्नुहुन्थ्यो, अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड राष्ट्रपति बन्ने खालको समीकरण बन्दै छ भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ । यो समीकरणमा ओलीजीले कसरी आफ्नो अडान कायम राख्न सक्नुहोला त ? प्राइममिनिस्टर भएपछि उहाँ पनि थामथाम–थुमथुमको राजनीतिमा अल्झिन बाध्य नहुनुहोला भन्ने के ग्यारेन्टी ?
० तपाईंको मतलब संविधानभन्दा पनि देश बनाउने नेता चाहियो भन्ने हो ?
– संविधान नहुँदा पनि मुलुक त चलिहाल्दो रहेछ नि । अहिले केको संविधान छ र ? त्यसैले म त प्रस्टसँग भन्दै आएको छु कि देश बनाउने, जनता बनाउने, नेपाल बनाउने नेता चाहियो, त्यो खालको राजनीति हुनुप-यो । स्पष्ट विचार हुनुप-यो र त्यसमा कायम रहन सक्ने हुनुप-यो ।